China Frozen Yakabikwa Nguruve Zvimedu fekitori uye vagadziri | Huikang
Chigadzirwa sumo Mbishi zvigadzirwa zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Kunze mbishi zvigadzirwa kunyanya kubva France, Spain, neNetherlands
kutaurwa Slice uye dice, pfeka tambo
Yakapeteredzwa Yechando Nzira
Iyo firimu-yakaputirwa chando nzira, iyo CPF nzira ine zvakawanda zvakanaka: iyo firimu yakaumbwa kana chikafu chando chichigona kutadzisa kuwedzera nekushanduka kwechikafu; kudzikamisa mwero wekutonhora, makristasi echando akaumbwa akanaka, uye haazogadzi makristasi makuru echando; kudzivirira masero kukuvara, chigadzirwa chinogona kunyungudutswa zvakasikwa; Iko chikafu chikafu chinonaka zvakanaka pasina kukwegura.
Ultrasonic inotonhora tekinoroji
Firimu-yakaputirwa nechando nzira, UFT inoshandisa ultrasonic mafungu ekuvandudza iyo chikafu kutonhora maitiro. Kubatsira kwacho ndekwekuti ultrasound inogona kusimudzira kupisa kupisa panguva yechando, kusimudzira chando crystallization panguva yechando chikafu, uye nekuvandudza mhando yechikafu chakaomeswa. Mhedzisiro dzakasiyana dzinokonzereswa neultrasound dzinogona kuita kuti muganho uve mutete, kuwedzera nzvimbo yekubatana, uye kushomeka kupisa kupisa kwekudzivirira, izvo zvinobatsira kuwedzera kupisa kupisa mwero. Tsvagiridzo yekusimbiswa kweiyo kupisa kupisa nzira inoratidza kuti ultrasound inogona kusimudzira iyo nucleation uye inhibition yechando crystallization Crystal kukura.
Yakakwira-kumanikidza inotonhora tekinoroji
Kumanikidza Kwakanyanya. HPF inoshandisa kumanikidza shanduko kudzora chikamu chinja maitiro emvura muchikafu. Pasi pemamiriro ekumanikidza (200 ~ 400MPa), chikafu chakatonhora kune imwe tembiricha. Panguva ino, mvura haina chando, uyezve nekukurumidza Iko kumanikidzwa kunodzikiswa, uye zvidiki uye yunifomu echando makristasi anoumbwa mukati mechikafu, uye huwandu hweakisi makristasi haazowedzere, izvo zvinogona kudzora kukanganisa kwemukati kuchikafu tishu uye uwane chikafu chakaomeswa icho chinogona kuchengetedza iyo yekutanga mhando yemhando yechikafu.
Pashure: Frozen Yakabikwa Nguruve Matanda
Zvadaro: Rudzi Rwakabikwa Rwakabikwa Nyuchi